Naayijeeriyaan miseensota raayyaa woraanaa 54 irratti adabbii du’aa murteessite - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Siyaasa Addunyaa Naayijeeriyaan miseensota raayyaa woraanaa 54 irratti adabbii du’aa murteessite
Naayijeeriyaan miseensota raayyaa woraanaa 54 irratti adabbii du’aa murteessite
Ajaja fudhachuu diduu, nunnumaa fi loluu diduun sababoota miseensonni raayyaa woraanaa kunniin akka du’aan adabamaniif murteen irratti darbeedha. Namoonni tankaarfiin adabbii du’aa kuni irratti fudhate kanniin Boko Haraamiin akka lolaniif bobba’an turan. Akka murtee manni murtii woraanaa dabarsetti, miseensonni raayyaa woraanaa kuni ajaja magaalota sadi harka Boko Haraamitti kuftee turte deebisanii qabachuuf baatii Hagayyaa keessa keennamee ture fudhachuu didaniiru. Kanniin himannaan irratti baname keessaa 5 yakka hunda irraa bilisa ta’aniiru.
Battii Fulbaanaa keessas miseensonni woraana biyyatti 12 murtiin du’aa irratti darbee ture. Kunis sababuma wolfakkaadhaan: ajaja hooggansaa fudhachuu diduu fi hoogganaa woraanaa tokko ajjeesuuf yaaluu kan jedhu. Raayyaan woraanaa kuniin ajaajaa isaanii tokko du’a saahiboota isaaniitiif itti gafataamaadha jechuun yakku. Waahiloonni isaanii kan du’an yeroo ajajni kennamee halkaniin deeman, naannoo Boko Haraam baay’innaan keessa sosso’utti, humna Boko Haraam qaafirii turen rukutamanii ajjeefaman.
Woraanni hedduun isaanii saahuu hidhannoodhaan Boko Haraamiin caalamuu, kafaltii gayaa argachu dhabuu fi dirree irratti nyaata fi rasasa gahaan alatti gatamuu isaaniiti kan himatan.
Boko Haraam magaalotaafi baadiyaa addaddaa kaaba Naayijeeriyaa naannoo Kaameruun daangessutti argaman qabtee baatii Hagayyaa keessa Kaliifaa Islaamaa labsuun isaa niyaadatama. Humni addaa biyyattii, ta’us garuu, sochii as dhihoo kana godheen magaalota 4 harka Boko Haraamiitii baasee gara too’annaa mootummaatti deebiseera, akka AP tti.
Previous articleHidhattoonni Taalibaan Paakistaan keessatti namoota 145 ajjeesan;132 barattoota
Next articlePerezidaantiin Somaaliyaa Alii Sharmarkee Muummicha Ministeraa godhuun muude